URadisson RED uya kuqala e-Abidjan, e-Ivory Coast
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » URadisson RED uya kuqala e-Abidjan, e-Ivory Coast
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziziiCote d'Ivoire • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • iindaba • Iindaba zeWired Travel
I-Radisson Hospitality AB, edweliswe esidlangalaleni eNasdaq Stockholm, eSweden nenxalenye yeRadisson Hotel Group, iyazingca ukwazisa ngokusayinwa kweRadisson RED Hotel Abidjan Plateau, e-Ivory Coast. Ipotifoliyo yamaQela aseAfrika ineehotele ezingama-90 + ezinamagumbi ayi-18,000 + asebenzayo naphantsi kophuhliso.
Icwangciselwe ukushukumisa ishishini lokubuka iindwendwe e-Ivory Coast ngo-2021, iRadisson RED Hotel eAbidjan Plateau yindawo yesibini eRadisson Hotel Group ukusayina e-Afrika kwaye iya kuba yindlela yokuphila yokuqala yokukhetha ihotele yase-Abidjan, isixeko esikhulu saseFrancophone e-Afrika. Ihotele ibekwe eBoulevard de Gaulle, kumda wedike lasePlateau, isithili senkulumbuso sesi sixeko saseNtshona Afrika siphambili, eyona ndawo ifanelekileyo yedolophu yehotele eya kuthi ibonise umdlalo oqhelekileyo wokudlala.
U-Andrew McLachlan, uSekela Mongameli oPhezulu, uPhuhliso, kwi-sub-Sahara Africa, Radisson Hotel Group, uthe: “Kuyasivuyisa ukuqalisa i-Africa Hotel Investment Forum ngo-2018 ngokutyikitywa kwehotele yethu yesibini iREDisson RED e-Afrika nokwazisa oku. idityanisiwe, uhlobo lwesavvy kunye nophawu lwentlalo kwisixeko esikhula ngokukhawuleza eAbidjan. IRadisson RED iveza umdlalo odlalayo kwizinto eziqhelekileyo. Sifaka ubomi obutsha kwiihotele ngokusebenzisa: iinkonzo ezingekho sesikweni apho nantoni na iya khona, indawo yentlalo elinde ukuba kwabelwane ngayo kunye noyilo olunesibindi oluqala ulonwabo. Sisoloko sihlaziyekile, sinika iindwendwe zeRED amathuba angapheliyo okungena kunye nokuphuma - sitshintshe ngaphandle kokusebenza phakathi kweshishini kunye nolonwabo. INairobi, elulungeleyo uphawu lweREDisson RED, indlela esiphila ngayo ikhetha ihotele ekumgangatho ophezulu ebonisa ukudlala ngendlela eqhelekileyo. ”
Ihotele entsha yokwakha, iya kuba namagumbi ali-165 aqukethe amagumbi e studio kunye nezikhuselo eziza kuba nemizobo yodonga engqindilili kunye noyilo olunesimo sengqondo. Ukutya kunye nomnikelo wehotele uya kubandakanya iRedeli kunye ne-Ouibar, ipremiyamu kunye nomphefumlo webar kunye nophahla lwendlu oluphezulu kunye nebala elinendawo ebukekayo yedolophu kunye nolwandle. Iindawo zokuzonwabisa ziya kubandakanya ipuli yokuqubha eluphahleni kunye nendawo yokuzivocavoca enezinto zonke, ukudala indawo yokuhlangana enentetho. Indawo yentlanganiso kunye neminyhadala izophula isiko ngesitudiyo sayo somnyhadala kunye namagumbi okufundela amane.